विद्यालय हाँक्दै गुरूआमा- फिचर - कान्तिपुर समाचार
विद्यालय हाँक्दै गुरूआमा
वैशाख २९, २०७४ गणेश राई
काठमाडौं — वैशाख लागेसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु भएको छ । काठमाडौं जिल्लामा २ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय छन् । तीमध्ये केहीमा महिला प्रधानाध्यापक छन्, जसले संघर्षबाट नेतृत्व लिएका हुन् । उनीहरूले सरकारी शिक्षकले जागिरे मानसिकता त्याग्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएका छन्, विद्यार्थी संख्यासँगै शैक्षिक गुणस्तर बढाएका छन् ।
बोर्डिङ स्कुलको तुलनामा सामुदायिक कमजोर छैन भन्ने बुझाउन सफल भएका छन् । फलस्वरूप बोर्डिङ छाडेर सामुदायिक विद्यालय आकर्षण गराउन सकेका छन् । विद्यालयको आयस्रोतको अभावमा ‘हुनेसँग वार्षिक सहयोग’ लिने गरेका छन् । प्रस्तुत छ, नयाँ भर्नालाई लिएर महिला शिक्षक समाजद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी नौ जना प्रधानाध्यापकले सुनाएका अनुभव :
प्रधानाध्यापक, नीलबाराही मावि, कालिमाटी
कक्षा १२ सम्म सुचारु छ । कुल ९ सय ४५ विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्म ६ सय ३५ थिए । नयाँ सत्रको लागि भर्ना लिने क्रम जारी छ । स्थानीय विद्यार्थी एकाधमात्र छन् । विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी छन् । कालिमाटी तरकारी बजारमा व्यापार गर्ने अभिभावकका छोराछोरी हाम्रा विद्यार्थी हुन् । ठाउँअनुसार विद्यालय भौतिक पूर्वाधार पुगेकै छ । भूकम्पपछि पुरानो भवन रेट्रो फिटिङ गरिएको छ । बिहान प्लस टु चल्छ । दिउँसो छ सयले पढ्छन् । त्योभन्दा बढी क्षमता छैन । कक्षा १० सम्म २४ जना शिक्षक छौं । त्योभन्दा माथिसमेत गरेका ४५ जना पुग्छ । भर्नाभन्दा शैक्षिक गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै छौं । विद्यार्थी आफैं आउँछन् । कक्षालाई बालमैत्री बनाउन तालिम चलाएका छौं । पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पाएका छैनौं । हामीले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउछौं । यो वर्ष कक्षा ८ सम्म पुग्दै छ । अंग्रेजी माध्यममा जनक शिक्षाले छापेको पुस्तक कक्षा ६ देखि लागू गर्ने भन्ने छ । तर अहिलेसम्म छापिएकै छैन भन्ने सुनिन्छ ।
डा. गीता खरेल शिवाकोटी
प्रधानाध्यापक, रत्नराज्य मावि, मध्यबानेश्वर
विद्यार्थी चाप अत्यधिक छ । बोर्डिङका विद्यार्थी ओइरिएका छन् । वैशाख २ गते प्रवेश परीक्षा लिएर दुई सयलाई नयाँ भर्ना लियौं । सभासदका छोराछोरी छन् । भर्ना फाराम लिन रोकेका छौं । स्कुलका शिक्षकका छोराछोरी त्यही विद्यालयमा पढाउने नीति छ । भूकम्पले २७ कोठा क्षतिग्रस्त भयो । सरकारका तर्फबाट एडीबीले बनाइदिन्छ भन्ने छ । हामी शिक्षक आफैंले रकम उठाउन थाल्यौं । समुदाय गुहारेर लगभग १ करोड रुपैयाँ उठाएर ६ कोठे भवन बनायौं । ठाउँको अभावमा ग्यारेज, अतिरिक्त क्रियाकला हल, कम्प्युटर ल्याबमा पनि विद्यार्थी राखेका छौं । कक्षा ९ मा साढे दुई सय, १० मा दुई सय भर्ना भइसके । ९ मा ए, बी, सी, डी, ई सेक्सन खोल्यौं । पढदै आएकाले छाड्दैनन् । भर्ना अभियान चलाउनुपरेन । विद्यार्थीले बस्ने स्टुल लिएर आउँछौं भन्छन् । समर्पित भएर लाग्ने हो भने समुदायको विश्वास जित्न सकिन्छ । ५७ जना दरबन्दी, तीनजना प्लस टु र कम्प्युटर शिक्षक आफ्नै स्रोतमा राखेका छौं । शिक्षकलाई समान ढंगले दस–चारको समयमा खटाउँछौं । पाँचसम्म अंग्रेजी माध्यम र कक्षा ६ देखिमाथि आधा नेपाली माध्यममा सुचारु छ ।
प्रधानाध्यापक, पञ्चकन्या मावि, छाउनी
म यो विद्यालयमा २०३० सालदेखि छु । उतिखेर समुदायले नै यो स्कुल बनाएको हो । अहिले समुदायले सहयोग गर्छन् तर उनीहरूको बालबालिका पढदैनन् । माध्यमिक भए पनि मावि शिक्षक दरबन्दी छैन । शैक्षिक योग्यता पुगेका तर प्रावि तह शिक्षकले पढाइरहनुभएको छ । प्राय: सबैजना बीए, बीएड, एमएड छन् । त्यसैले पनि सहयोग मिलेको छ । कक्षा १० सम्म सुचारु छ । साढे दुई सयजति विद्यार्थी छन् । सबै बाहिर जिल्लाका छन् । सैनिक, मजदुरी गर्नेका छोराछोरी छ । पढाइ स्तर र पास प्रतिशत राम्रै छ । भर्खरै अंग्रेजी माध्यमबाट सुरु गरेका छौं । विद्यार्थी संख्या कम हुँदै जानुचाहिँ दु:ख लाग्दो छ । कम्प्युटर व्यवस्था गर्दै छौं ।
प्रधानाध्यापक, सहिद शुक्र मावि, बागबजार
१० वर्षदेखि प्रअ छु । कक्षा १० सम्म पढाउँछौं । विद्यार्थी ४ सयजति छन् । नेवार बस्ती भए पनि स्थानीय बालबालिका कम आएका छन् । भृकुटीमण्डपमा व्यापार गर्ने, मजदुरी गर्ने अभिभावकका छोराछोरी हाम्रा विद्यार्थी छन् । सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षक बोर्डिङमा पनि पढाउँछन् । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीको पढाइ कमजोर छ, होमवर्क गर्दैनन् । बोर्डिङमा तुरुन्तै गर्छन् । म भन्ने गर्छु, जानेकोलाई भन्दा नजानेकोलाई सिकाऔँ । विद्यार्थीको गहना भनेकै नजान्नु हो । कक्षा कोठाको कमीले गर्दा बिहानी र दिउँसो कक्षा चल्छ । जसले गर्दा केही बाधा पुगेको छ । भूकम्पले त्यति प्रभाव परेको छैन । २२ वटा सटर भाडामा दिएका छौं । आम्दानीबाट विद्यालयको नयाँ भवन बनेको छ । सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका निम्ति नयाँ विधिबाट अपनाएका छौं । शिक्षण तालिमलाई व्यवस्थित गरेका छौं । समाजको माझमा केही राम्रो देखिन थालेका छौं । अंग्रेजी माध्यम, डायरीको व्यवस्था गरेका छौं । विद्यार्थीलाई सुविधा दिलाउन प्रयासरत छौं ।
प्रधानाध्यापक, बालविकास मावि, इचंगु नागार्जुन
स्कुल पहाडको कुनामा छ । ०४९ सालदेखि हेडमास्टर छु । साढे चार सय विद्यार्थी थिए । यो पटक धेरै नयाँ विद्यार्थी थपिएका छन् । बोर्डिङ छाडेर आएका छन् । स्थानीय ५ प्रतिशत छन् । शिक्षक २५ जना छौं । सहयोगदाता धेरै आए । सबै सेवा सुविधा छ । भूकम्पपछि । विद्यालय व्यवस्थापन ज्यादै राम्रो छ । महिला हेड मिसले धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर सघाउनु हुन्छ । भौतिक व्यवस्थापन चुस्त छ । सबै महिला राम्रो पनि छैनन्, सबै पुरुष खराब पनि छैनन् । तैपनि महिला नेतृत्व खराब छैन भन्ने सावित गरेको छु भन्ने लाग्छ ।
प्रधानाध्यापक, पद्मकन्या विद्याश्रम मावि, डिल्लीबजार
कक्षा १२ सम्म पढाउँछौं । ९ सय ५० पढ्छन् । छात्रा मात्रै पढ्नु आफैंमा रमाइलो छ । शिक्षक महिला र पुरुष दुवै छौं । स्पष्ट बोल्छन् । एक अभिभावकको दुई छोरा–छोरी छ भने एउटै स्कुलमा पढाउन खोज्छन् । त्योचाहिँ हाम्रो निम्ति चुनौती छ । यो ऐतिहासिक स्कुल जुन २००४ सालमा पद्मशमशेरले खोलेका हुन् । महिलालाई पढाउन भनेर विशेष स्कुल हो । यहाँका विद्यार्थी उच्च ओहदामा पुग्नु भएको छ । त्यो इतिहासलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो । गत वर्षदेखि कक्षा ९ मा प्राविधिक धारमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ थालेका छौं । छात्राहरू अझ आकर्षित होऊन् । दीर्घकालीन बन्न सकोस् भनेर । बोर्डिङ छाडेर आएका छन् । सरकारले व्यवस्थापन गर्न सघाएको छ । १३ रोपनी क्षेत्रफलमा छ । प्राविधिक धारमा ४३ जना छन् । कार्पेन्टरी, डकर्मी, सर्भे, फिल्ड भिजिट गर्छन् । बच्चाहरू अति क्रियाशील छन् । टीएसएलसी गरेर स्वरोजगार बन्छन् । भारतीय दूतावासको सहयोगमा एक सयजना अट्ने छात्रावास बन्दै छ । होस्टलमा शुल्क लिइन्छ । हामी हरेक शनिबार जाँच लिन्छौं ।
प्रधानाध्यापक, नन्दी मावि, नक्साल
दुई वर्षदेखि नेतृत्व सम्हाल्दै छु । कक्षा १० सम्म पढाउँछौं । गत वर्ष साढे चार सय विद्यार्थी थिए । यो सत्रमा बोर्डिङबाट सयजना जति भर्ना हुन आएका छन् । भर्ना साढे पाँच सय भइसकेका छन् । भर्ना हुने क्रम जारी छ । बाहिरबाट आएका विद्यार्थी बढी छन् । कक्षा १–१० सम्मै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ । पाठ्यपुस्तक पर्याप्त पाएका छैनौं । कुन कुन प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक पढाउने भन्ने लिस्टको तयारी हुँदै छ । नन्दी मावि भूकम्पले भुइँमा पुगेको विद्यालय हो । भूकम्प वरदान सावित भएको छ । हामीसँग उभिने ठाउँ पनि थिएन । पालमा कक्षा चलाएका थियौं । अहोरात्र खटेर सेना, स्थानीय स्वयंसेवकको सहयोगले भग्नावशेषहरू व्यवस्थापन गर्‍यौं । दाताको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार राम्रै बनेको छ । ३९ जना शिक्षक छौं । कार्यविभाजन गरेका छौं । दुई सहायक प्रधानाध्यापक र अरू विभाग गठन गरेका छौं । अंग्रेजी, गणित, सामाजिक, नेपाली विभागले आ–आफ्नो विषय निगरानी राख्छन् । यस पटकबाट कम्प्युटर आईटी विभाग थपेका छौं ।
प्रधानाध्यापक, धूम्रबराह मावि, धुम्बाराही
कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । गत वर्ष पाँच सय दश विद्यार्थी थिए । यो वर्ष चार सय ७५ जना भर्ना भइसकेका छन् । विद्यार्थीहरू गाउँबाट फर्किन क्रममा छन् । नयाँ चालिस जना भर्ना भएका छन् । स्थानीय न्यून छन् । कक्षा ६ देखि १० सम्म बढी छन् । यो वर्ष निर्वाचनको सामग्री छपाईले गर्दा पाठ्यपुस्तक पाएका छैनौं । बाल विकासमा खाजा दिने गरेका छौं । भूकम्पपछि युनिसेफले सहयोग गरेको छ । विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल बन्न नसक्दा समस्या भएको छ । शिक्षक १८ जनामात्र छौं, पुगेको छ । वार्षिक कार्यतालिका बनाइसकेका छौं । यो वर्ष निजी विद्यालयसँग मिलेर शिक्षक तालिम दिलाउन पायौं । ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा नन्दी माविमा एकसाथ तालिम भयो । अंग्रेजी माध्यम आकर्षणको पक्ष बनेको छ । अभिभावकले अंग्रेजी जान्यो भने केके भन्ने लाग्दोरहेछ । त्यसैले हामीले गत वर्षदेखि थाल्यौं । तर समस्या छ । बाहिरी जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई समस्या छ । त्यसैले सिकाइमा समस्या छ ।
कुमारी कमला राई
प्रधानाध्यापक, जनकल्याण मावि, बौद्ध महांकाल
म २०५१ सालदेखि जनकल्याण माविमा कार्यरत छु । खोटाङबाट सरुवा भएर आएको हो । तुलनात्मक रूपमा गाउँभन्दा पढ्ने वातावरण सहरमै बढी हुन्छ । तर, सहरमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सबै कामदारका छोराछोरी हुन्छन् । पढेलेखेका अभिभावकले सामुदायिकमा पढाउन ल्याए हामी बोर्डिङभन्दा कुनै कमी हुन दिँदैनौं । गत साल साढे १२ सय विद्यार्थी थिए । यो पटक पुराना नियमित ५ सय ८० र नयाँ झन्डै २ सय भर्ना भइसकेका छन् । भर्ना क्रम जारी छ । बढ्छ, घटदैन । कक्षा ५ देखि ८ सम्म भर्ना चाप छ । भूकम्पले चिरा परेको भवन बनाउन दाता खोजी गर्‍यौं । चिनियाँ दूतावासमार्फत नेपाल–चाइना कैलाश कल्चरल प्रोमोसन डेभलपमेन्ट भन्ने संस्थाको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । विद्यालयमा २०५३ देखि पुस्तकालय छ । १०–१२ हजार पुस्तक छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्टाफ अनुशासन मेन्टेन भएको छ । कार्ययोजना क्यालेन्डर वितरण गरेका छौं । लेभलअनुसार छोराछोरीसहित अभिभावक भेला गराउँछौं । तपाईंलाई हाम्रो छोराछोरी जिम्मा लगाएका छौं हेडम्याम भन्नुहुन्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७४ ०९:३४
ओबर सम्मेलन र नेपाल
ऋण नै सही, ओबरलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रयोग गर्न सकिए मुलुकको अनुहार फेरिन सक्छ ।
वैशाख २९, २०७४ ध्रुव कुमार
पर्सि वैशाख ३१ गते लोकतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुई दशकपछि परिवर्तित राज्यव्यवस्था अनुसार संघीय प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।
घरेलु राजनीतिमा अस्थिरता र अन्योलग्रस्त सरकारको निम्ति यो सुखद क्षण हुनेछ । त्यही दिन नेपालले बेइजिङमा सुरु हुने चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘वान बेल्ट, वान रोड’ (ओबर) योजना सम्बन्धी दुईदिने अन्तरमहादेशीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछ । ओबरप्रति राजनीतिक स्तरमा नेपाली नेतृत्व वर्गको प्रतिबद्धताको बाबजुद निकै अन्योल, छलफल तथा कूटनीतिक वार्ता र संवादपछि सहकार्य र सहभागिताको विकल्प अप्रिय हुनसक्ने निचोडसहित ढिलै भए पनि चिनियाँ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी उक्त योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
ओबर योजनाको प्रस्तावक चीनका प्राज्ञिक, राजनीतिक तथा सैनिक जुनसुकै हैसियतका उच्चस्तरीय पदाधिकारीले नेपाल भ्रमण गर्दा उक्त योजनामा सहभागिताबाट हामीलाई हुने लाभैलाभको आश्वासन बाँडेका छन्, चाहे ती प्रायोजित गोष्ठीहरूमा हुन् वा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा हुन् । ओबरको अवधारणा ‘चिनियाँ सपना’ले निर्धारण गरेकाले त्यसको उद्देश्य पक्कै पनि सहभागी मुलुकहरूलाई पुग्ने लाभमा मात्र सीमित रहेको छैन । किनभने यो आर्थिक, भूराजनीतिक र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित योजना चीनको परोपकारी नीति अवश्य पनि होइन । ओबरको जुन ढंगले प्रचार–प्रसार गरिएको छ, त्यसमा चीनको दूरगामी राष्ट्रिय उद्देश्य जोडिएको छ । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजना साकार गर्नकै निम्ति चीनको तत्वावधानमै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) २०७१ सालमा स्थापना गरियो । नेपाल समेत उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य रहेको छ । एआईआईबीको मूलभूत उद्देश्य नै ओबर अन्तर्गतका योजनाहरूमा लगानी गर्नु हुनेछ । यसको निम्ति प्रारम्भिक चरणमा ९०० अर्ब अमेरिकी डलर लागतको योजनाहरूको खाका तयार भइसकेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । चीनले आफ्नो दक्षिणी र पश्चिमी भेगमा रहेका सहभागी राष्ट्रहरूमा वार्षिक १५० अर्ब अमेरिकी डलर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी आफ्नो बजार विस्तार गर्नुका साथै प्रभाव बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाल–चीनबीच पूर्वाधार निर्माणका साथै द्विपक्षीय विकास योजनाहरू ओबरकै बृहत अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सहमति हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७२ मा चीन भ्रमणको बेला व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुसितै भएको थियो । तत्पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयसमेत हौसिंँदै ‘ट्रान्स हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र’ खोल्ने तरखरमा जुटेको थियो । तर दुर्भाग्य, सरकार परिवर्तनसितै नेपालमा ओबरप्रति शिथिलता छायो । अहिले सन्दर्भ फेरिएको भए पनि ओबरमा नेपालको सहभागिता र सहकार्य आफ्नै प्राथमिकतामुखी हुनुपर्छ । ओबरको प्राथमिकता ‘कनेक्टिभिटी’ र पूर्वाधार निर्माण भएकोले दक्षिण एसियामा चीनको प्रवेशद्वार नेपाल हुँदा हामीले आफ्नै पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यसित चीनको लक्ष्यलाई जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमात्र नभई भूबनोटको संरचना पनि पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउने खालको छ । विकासको गतिशून्य स्थितिबाट गतिशील स्थितिमा पुग्न विश्व बैंककै २०७१ तिर प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बर्सेनि १८ अर्ब अमेरिकी डलर आउँदो ५ वर्षसम्म पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिनु पर्नेछ । यो खर्च रकम हाम्रो औकात बाहिर छ । किनभने विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा १८ अर्ब अमेरिकी डलर लगभग कुल गार्हस्थ उत्पादनसरह नै हुन आउँछ ।
यति ठूलो रकम उपलब्ध गराई पूर्वाधार निर्माणको जोहो गरिदिन हाम्रोलागि अरू मित्रराष्ट्र वा वित्तीय संस्था पनि तम्सिने छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को हालै (वैशाख २०७४) मा सम्पन्न ४ दिने गोष्ठीमा पूर्वाधार निर्माणको निम्ति स्रोत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि उक्त बैंकले आगामी ३ वर्ष (२०७७) सम्म आर्थिक सहयोग रकम २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तसर्थ एडीबी हाम्रो पूर्वाधार निर्माण खर्च जुटाउने मुख्य माध्यम हुनसक्दैन । पूर्वाधार विना नेपालको विकासको सम्भावना क्षीण हुने हो भने ओबरमार्फत चीनसित पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहभागी त हाम्रोलागि अपरिहार्य मात्र होइन, लाभदायी विकल्प पनि हुनसक्छ । ऋण नै सही, ओबरलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रयोग गर्न सकिए यसले मुलुकको अनुहार फेर्न सक्छ । स्पष्टतया ओबरमा सहभागिताबिना नेपालको चीनसितको सम्बन्ध र लगानीको सम्भाव्यता नै क्षीण हुनुका साथै क्षेत्रीय राजनीतिमा भुटानभन्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कमसेकम भुटानले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भारतप्रदत्त बीबीआईएनको सहभागिता नकार्न त सक्यो ।
लगानीको निम्ति गुहार्न हामी चुकेका छैनौं । तर विधिविधान अन्तर्गत सञ्चालित भई आवश्यक वातावरण बनाई लगानीकर्ताको विश्वास जित्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व भने चुकेको छ । लगानी प्रबद्र्धनकै निम्ति भर्खरै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध भएका गैरआवासीय राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग २ दिने गोष्ठी गर्दै नेपाल लगानी उपयुक्त मुलुक भएको प्रचार गरिएको अवस्थामा ओबरमा सहभागिताद्वारा लगानी सहज गर्न चीनलाई आकर्षित गरिराख्नुपरेको छैन । तर आफ्नो स्वार्थप्रति संवेदनशील भई त्यसको जगेर्ना गर्न भने सचेत रहनु अनिवार्य छ । किनभने लगानी सित्तै आउँदैन । हामीले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार चीनसित समझदारी गरी योजना सञ्चालन गर्न सकेनौं वा ‘नेपाल गौरव’का योजनाहरूजस्तै अलपत्र छोडी गौरवगाथा गाएर बस्ने अवस्था आए नेपाल ऋणमा डुब्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण तथ्य के भने ओबरमा सहभागितासितै लगानीमात्र बढ्ने होइन, चिनियाँ श्रम, प्रविधि, प्राविधिक, व्यापारका साथै स्वार्थ पनि बढ्नेछ । ओबर निश्चय नै आर्थिक समृद्धि अभिप्राय: अनुरूप प्रस्तावित योजना हो । तर आर्थिक हितको संरक्षकत्वकै निम्ति क्रमश: सैन्यशक्ति बढ्नु, सैनिक छाउनीहरू स्थापित हुनुसितै जलमार्गको सुरक्षार्थ नौ सैनिक अखडाहरू बढ्दै जानुले खासगरी एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा चीनको सामरिक शक्ति हावी हुने सम्भावना पनि रहेको छ । तर युरोपियनसहित चीनले सहकार्य गर्ने ती महादेशीय राष्ट्रहरूको शासकीय व्यवस्थाको प्रकृति भने समान छैन । चीनको साम्यवादी व्यवस्था प्रभावित आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ग्राह्य नहुनु पनि सक्छ । अनि तानाशाहीहरूका लागि सहकार्यको चरणमा अनपेक्षित चुनौती हुनसक्छ । अर्काे कुरा, ओबरमा सहभागी हुने कतिपय मुलुकहरूको सामरिक स्वार्थसित चीनको स्वार्थ बाझ्न पनि सक्छ । दक्षिण–पूर्वी एसियामा यसको झझल्को देखिन्छ पनि । त्यस्तै भारतको ओबरमा (अ) सहभागिताको उदाहरणलाई पनि लिन सकिन्छ ।
ओबर योजना अन्तर्गत चीनले ६ वटा आर्थिक ‘कोरिडोर’को अवधारणा विकसित गरेको छ । त्यसमध्ये चीन–पाकिस्तान आर्थिक ‘कोरिडोर’ (सीपीईसी) र बंगलादेश–चीन–इन्डिया–म्यानमार आर्थिक ‘कोरिडोर’ (बीसीआईएम) हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्धमा बढी सान्दर्भिक छ । बीसीआईएममा सहभागिताको लागि भारत आकर्षित हुने निश्चितप्राय: छ । तर उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कारण सीपीईसीको विरोध गर्दै त्यसैले गर्दा ओबर सम्मेलनमा भाग पनि नलिने र सहभागिता नजनाउने भन्दै आएको छ । तर वास्तविकता अलि भिन्नै छ । भारत सहभागी हुनसक्ने बीसीआईएम ओबर योजनाकै दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्र लक्षित ‘कोरिडोर’ रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । जुन चीन–इन्डोचाइना पेनिन्सुला ‘कोरिडोर’ सित गाँसिन पुग्छ । यसले भारतको ‘पूर्व हेर्ने’ नीतिलाई यथेष्ट सघाउँछ । तसर्थ सीपीईसीले भारतको सार्वभौमिकता मिचेको चीनप्रतिको गुनासोकै कारण ओबरमा सहभागी नहुने अडान यहाँनिर अलि अमिल्दो देखिन्छ ।
ओबर योजनामा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सहभागिता र सहकार्यले यस क्षेत्रको परम्परागत भूराजनीतिक अवस्थिति फेरिनेछ । यसले दक्षिण एसियाली सुरक्षा संरचनाको स्थापित मान्यतालाई तहसनहस गर्नेछ । भारतको अभेद्य शक्तिराष्ट्र हुने लक्ष्य भत्काउनेछ । ओबरमा माथि उल्लिखित मुलुकहरूको सहभागिताबाट साँध जोडिएका निकट छिमेकीहरूसितै भारतले विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्न असफल रहेको संकेत दिन्छ । दक्षिण एसियामा साना छिमेकीहरूमा प्रभाव घट्नुको कारण चीन होइन, आफ्नै दुर्नीति रहेको भारतले बुझ्न चाहेको छैन । तसर्थ छिमेकीसित सम्बन्ध सुधार नै भारतको निम्ति चुनौती हुनेछ । भारतले नचाहँदा पनि चीन आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुँदै गएको दृष्टान्त अन्तिम अवस्थामा आएर ओबर प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपालको निर्णयले नै पुष्टि गर्छ । नेपालले वर्षाैंअघि नै ओबरको समझदारी पत्र (एमओयु) मा सहमति जनाए पनि प्रस्ताव स्वीकार्दै हस्ताक्षर गर्न हच्किएको कारण भारतीय दबाब रहेको चीनमा व्यापक बुझाइ छ । नेपालको यस निर्णयले सायद चीनको मानसिकता फेरिनेछ ।
ओबर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरू कसरी प्रस्तुत हुनेछन्, त्यसबारे बुझ्न केही समय कुर्नु नै पर्नेछ । तर अहिले ओबरबारे उठेका थुप्रै जिज्ञासा भने अझै अनुत्तरित नै छन् । त्यस मध्येको एउटा खुल्दुली यो सहभागी राष्ट्रहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हुने हो वा चीनको राष्ट्रिय योजनामात्र हुने हो ? ओबर सम्मेलनमा यसबारे चीनको प्रस्ट दृष्टिकोण आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । किनभने यो जिज्ञासा चीनभित्रै पनि छ । कतिपय चिनियाँ अध्येयताहरूसमेत ओबरको रणनीतिक भूमिकाप्रति अझै स्पष्ट छैनन् ।